Madaxweynaha Maraykanka Oo Laga Duubay Cajalad Isaga Oo Lacag Kula Gorgortamaya Haweenay Uu La Seexday – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Maraykanka Oo Laga Duubay Cajalad Isaga Oo Lacag Kula Gorgortamaya Haweenay Uu La Seexday
(SLT-Washington)-Cajalad sir ah oo laga duubay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa laga baahiyay taleefishinka CNN ee dalkaasi, waxayna arrintan sare usii qaadaysaa fadeexadihii markii hore ku furnaa.
Cajalka ayaa waxa uu ku saabsanyahay wada sheekeysi dhex maray Trump iyo garyaqaankiisa Micheal Cohen , waxayna ka sheekeysanayeen sidii lacag loo siin lahaa haweenay uu Trump la seexday oo lagu magacaabo Karen McDouga.
Waxaa cajalka la duubay sanadkii 2016-kii markii uu Trump u tartamayay xilka madaxweynenimada ee uu markii dambe ku guulaystay.
Garyaqaanka hadda ee Trump mudane Rudy Giuliani ayaa sheegay in aysan jirin wax lacag ah oo la siiyay haweenaydan, cajalkana uusan muujinaynin wax dambi ah oo uu madaxweynaha galay.
Cajalka ay baahisay CNN ayaa waxaa la sheegay in uu qeyb ka yahay kuwa ay FBI-da kasoo heshay guriga Cohen xilli loo dhacay.
Trump iyo Cohen ma wada shaqeeyaan, dacwado ayaana ku furan Cohen.
Warar soo baxay ayaa sheegay in Ms McDougal ay wargeyska National Inquirer ka heshay lacag dhan $150,000 , lacagtaas oo laga siiyay sheekadeeda.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionMr Cohen ayaa mar sheegay in uu madaxweynaha dartiis xabbad isugu dhigi karo
Wasaaradda caddaalada ee Maraykanka ayaa baaraysa dacwado la xiriira in lacago la siiyay dumar la seexday Trump, waxayna sheegadan cusub culeeska kusii kordhinaysa madaxweynaha.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionDonald Trump ayaa beeniyay in uu la seexday Ms McDougal
Karen McDougalwaa haweenay ka mid ah kuwa dharka xayaysiiya, waxayna u shaqayn jirtay majalladda Play Boy, waxayna sheegtay in ay muddo 10 billood ah xiriir la lahayd Mr Trump sanadkii 2006-dii.
Waxa ay qisadeeda u sheegtay wargeyska National Enquirer, iyada oo saxiixday heshiis dhan $150,000 , kaas oo gabi ahaanba sheekadan xaq u siinaya wargeyskan in isaga uu yeesho sheekada.
Waa isla sheekadan oo aanan la baahinin tan cajalka la duubay uu ku saabsanyahay iyada oo laga wada hadlayo sidii looga gadan lahaa wargeyska, islamarkaasna aanan loo faafin lahayn doorashada ka hor.
Micheal Cohen oo ay madaxweynaha aad isugu fiicnaayeen, marka sheegay in xitaa madaxweynaha dartiis uu xabbad isugu dhigi karo ayay hadda aad isugu xunyihiin, wuxuuna sheegay in uu daacad u yahay dalka iyo qoyskiisa oo kaliya.
Isaga ayaa la sheegay in uu yahay qofka duubay sheekada Trump ee ku saabsan haweenaydan.
Hadaladiisa cusub ayaa loo arkaa in laga yaabo in uu wada shaqayn la yeelan doono baarayaasha,.
“Dabka Ka Kacay Kaymaha Sanaag Iskama Iman Ee Cid Ayaa Ka Shaqaysay Oo Fududaysay, Dadkii Ka Dambeeyay Qaarkood Way Xidhan Yihiin…” Maamulka Gobolka Sanaag
By Wariye July 6, 2022
Kulankii Koowaad Ee Wada-Hadallada Madaxweynaha Iyo Hoggaanka Axsaabta Mucaaridka Oo Si Rasmi Ah Maanta U Bilaabmay.
Waxa maanta qasriga madaxtoooyada Jamhuuriyadda Somaliland ka bilaabmay kulankii koowaad ee wada-hadallada u dhexeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda...
Nin 19 Sanno Dambi La’aan Ugu Xidhnaa Talyaaniga Oo Muqdisho Lagu Dilay.
(SLT-Muqdisho)-Wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax Miino oo gaadhigiisa loogu xidhay uu...
“Waxa Jeelka La Igu Hayey Anigoo Dhaawaca Ah, Taasi Na Waxay Keentay Inaan Indhaha Beelo…”
“Abwaan Dhoodaan Waxa Uu Si Weyn Uga Hor-Yimid Dulmiga Iyo Kali-Taliska…” Qoraaga Buuga Qaryan Dhoodaan Oo Sharraxay Buugga
By WariyeJuly 6, 2022